अनावश्यक कपालको समस्याबाट कसरी छुटकारा पाउने? बाक्लो शरीरको कपाल भएको केटी आउनुहोस् र हेर्नुहोस् कम्पनी समाचार-शेन्जेन नो स्मार्ट स्मार्ट निर्माण प्रौद्योगिकी कम्पनी लिमिटेड।
अनावश्यक कपालको समस्याबाट कसरी छुटकारा पाउने? बाक्लो शरीरको कपाल भएको केटी आउँनुहोस् र हेर्नुहोस्
समय: 2020-05-20 हिट्स: 3
यो हाम्रो ग्राहकहरु मध्ये एक को योगदान हो। धेरै धेरै धन्यबाद, तपाईंले हामीलाई वास्तविक प्रयोग अनुभवमा प्रतिक्रिया दिनुभयो। तपाईंको समर्थनका लागि धन्यबाद, हामी भविष्यमा अझ राम्रो गर्छौं!
ग्रीष्म comingतु आउँदैछ, कपाल केटीले मसँग उस्तै समस्या भएको हुनुपर्छ।
म सबै राम्रा स्कर्टहरू बिना स्लीभलेस शीर्ष लगाउने आँट गर्दछु!
एक दिन पछि, कपाल बाहिर आए! ग्रिलको रूपमा, यो बिल्कुल अस्वीकार्य छ!
त्यसैले मैले यसको राम्रो देखभाल गर्ने निर्णय गरें।
यस अवधिमा म धेरै यात्री मार्गहरू पनि पार गरें। उदाहरण को लागी, मैले एक ब्राण्ड डिपाइलेसन क्रीम प्रयोग गरें जसले मलाई आलिक बनाउँदछ। अर्को ब्राण्ड मैले पनि प्रयास गरेको छु, मलाई एलर्जी थिएन तर कपाल लामो भन्दा लामो भयो; जब म डिप्लिटेसन मोम कागज प्रयोग गर्नका लागि प्रयोग गर्थें, मैले सोचें कि यो लामो समयको लागि रहन्छ, तर त्यसपछि यो लामो समय सम्म फिर्ता हुन्न। कस्तो धेरै अप्रिय अनुभव!
मलाई कपालको केटीको पीडा, मलाई थाहा छ!
पछि मैले थाहा पाएँ कि त्यहाँ ब्यूटी सैलूनमा डिप्रेलेसन सेवा छ .. मेरो कपालका लागि मैले यो प्रयास गर्ने निर्णय गरें, तर मूल्य धेरै महँगो छ! भर्खरै यस समयमा, मेरो सबैभन्दा मिल्ने साथीले मलाई यस ब्राण्डको घर कपाल हटाउने सिफारिश गर्दै, प्रभाव धेरै राम्रो छ भन्ने बताउँदै छ, र मुख्य कुरा के भने यो महँगो छैन, सयौं टुक्रा सम्पूर्ण शरीर कपाल हटाउनका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ! त्यसो भए, म एक खरीद गर्न हिचकिचाएन। उत्पाद चित्रमा देखाइएको छ:
यो मैले किनेको एक उच्च-अन्त संस्करण हो। मुख्य कुरा केश हटाउन को लागी पीडारहित हो। पाँच सब भन्दा छिटो डिपिलेसन गियर प्रयोग गरिएको छ। यो वास्तव मा चोट लाग्दैन!
पहिलो महिनामा यसलाई हप्तामा एक पटक प्रयोग गर्न सिफारिस गरिन्छ, तर म चिन्तित छु। म यसलाई एक महिनामा दुई पटक प्रयोग गर्दछु, स्पष्ट रूपमा कपालको बृद्धि गति सुस्त छ! उपचार को एक पाठ्यक्रम तीन महिना हो। दोस्रो र तेस्रो महिनाहरूमा, म यसलाई आधा महिनामा एक पटक र महिनामा एक पटक निर्देशनहरू अनुसार प्रयोग गर्दछु। उपचार पछि, मेरो छाला राम्रो छ! ग्राहक सेवा सोध्दा, उनले भनिन् कि तीव्र स्पन्दित बत्तीमा छाला कायाकल्प कार्य हुन्छ, जुन वास्तवमै एक अप्रत्याशित फसल हो।
कुनै अनावश्यक कपाल वास्तव मा एक राम्रो भावना हो, विचार को एक बोझ फ्याक। म केश केटी होईन! म वास्तवमै अन्य केटीहरूलाई नचाहिने कपालको समस्याको सिफारिश गर्दछु, किनकि म तपाईंलाई लाज जान्दछु! मलाई आशा छ कि म तपाईंसँग केही उपयोगी चीजहरू साझेदारी गर्न सक्दछु।
मलाई पहिले र पछिको तुलना देखाउनुहोस्। म पनि सकेसम्म चाँडो तपाईंको कपाल हटाउने सफलता चाहन्छु!
अघिल्लो: नोबल स्मार्ट M7 उपकरणको साथ घरमा आईपीएलको reasons कारणहरू
अर्को: आईपीएल कपाल हटाउने घर को रहस्य （तीन）